kamwe kamwe yako yakakura iphone yakakosha kushoma kana iwe uchichinjisa iyo kune imwe nyowani
Kuru Nhau & Ongororo Kamwe kamwe yako yakakura iPhone inodhura zvishoma kana iwe uchichinjisa iyo kune imwe nyowani
Kana zvese zvikafamba mushe, mumavhiki angasvika mapfumbamwe avo vane Apple iPhone 11 dzakateedzana unit vanozosvika mukuziva kamwe kamwe kuti havasisina yavo yazvino mamodheru e iPhone. Kune vazhinji, hupenyu huchaenderera mberi sepakutanga; vamwe vachange vachiwana mameseji kubva kuhuropi hwavo maminetsi makumi matatu anoti 'Unofanira-Kuvandudza-Ku-iPhone 12.' Uye padyo padyo padanho rekuburitswa kweiyo 2020 5G iPhones, iko kunonyanya kukurumidza meseji inova kune iro rekupedzisira boka kusvikira izvo zvave zvese zvavanogona kufunga nezvazvo.
Kunyangwe isu tisati taziva iwo madhisheni, anodudzira, anodonhedza, uye Ming-Chi Kuo vakatipa iwo mapama ekurova pamusoro pechinoshanduka kutarisira. Panofanirwa kuve nemhando ina, dzese dzine OLED pani; nepo ese mana achizotsigira 5G, ese 5G anogona kunge asingatsigirwe neana. Iwo ma'Pro 'mayunitsi anozoshanda neese anononoka sub-6Hz 5G masaini uye nekukurumidza mmWave 5G spectrum nepo iwo mamodheru akajairwa achingoenderana neyekutanga. Ese mana achapihwa simba neiyo 5nm Apple A14 Bionic chipset ine 15 bhiriyoni transistors akarongedzwa mukati mechimwe nechimwe chinhu. Iyo 5.4-inch iPhone 12 uye iPhone 12 Plus inotakura 4GB yekumusoro, iwo mauniti eprimiyamu achave ne6GB ye RAM. Uye zvese zvina zvichave zvakapetwa mativi akafanana nedhizaini inoshandiswa pane iyo iPhone 4 mutsetse. Nepo masimba emabhatiri aigona kuratidza kumwe kusvetuka kukuru, mamwe acho achashandiswa mukubatanidza kwe5G.
Kana iwe uri kuronga kutengesa mune yekare iPhone kuti ubvise imwe yemutengo wekutenga iyo iPhone 12 modhi, MacRumors yakaonekwa imwe data inokanganisa. Apple yakaderedza huwandu hwekutengesa-muhuwandu nemadhora makumi mashanu emafoni ayo ekukwegura. Ramba uchifunga kuti izvozvi izvi zvekutengeserana-mumakosheni zvinoshanda pakutengwa kweiyo iPhone 11 dzakateedzana nhare. Kana Apple ikachengeta aya maratidziro ekutengesa kune iyo kutenga ye iPhone 12 modhi, kuderera kweiyo kukosha kuchakuvadza chaizvo vatengi uye kwete chete nekuda kwekudonha kwemari kubva padenda. Sezvo Apple ichinzi inoronga kuburitsa maPhones e2020 pasina chaja kana maEarPod mubhokisi, $ 50 yaizoenda kure kuenda kuma $ 59 (mitero isati yatanga) yaida kutsiva vaviri ava. Asi Apple inofungidzirwa kuti ine bhokisi rakazonaka rakarongwa saka zvese zvakanaka, handiti? Kwete saizvozvo. Vazhinji vatengi vangatoda kuenda kune dambudziko rekutenga izvo zvisipo. v
Iye zvino dzokera kune yakadzikiswa yekutengesa-mune kukosha:
$ 450 - $ 50
$ 370 - $ 50
$ 270 - $ 30
$ 220 - $ 30
$ 170 +/- 0
$ 130 - $ 20
$ 110 - $ 10
$ 100 +/- 0
$ 70 - $ 10
iPhone 6 Uyezve
$ 45 - $ 5
$ 30 +/- 0
Iwe & apos; unosungirwa kuwana mari yakawanda ye iPhone yako kana ukaitengesa uri wega asi izvo zvichatora nguva yakawanda nesimba. Iwe uchine imwe nguva izvozvi kuti uone kana iwe uchigona kuwana mutengi pa eBay kana Craig & apos; s Rondedzero asi chenjera nezve izvi. Usatombo panjodzi yekutapukirwa nekutaurirana takatarisana; shandisa FaceTime kana Duo pachinzvimbo. Yetatu-bato saiti senge Gazelle inotenga yako yekare iPhone, asi kana mari iri kuenda kunotenga iyo nyowani 2020 iPhone, ungangoda kupfuura nzira iyi. Izvo & apos; s nekuti urikubhadhara mutengo wekureruka kwekushandisa wechitatu-bato femu. Semuenzaniso, yakavhurwa 64GB iPhone XS Max mune yakanaka mamiriro pasina kana kukwenya kunotora $ 242 paGazelle. Apple, kunyangwe iine $ 50 yakatemwa, icharamba ichikupa $ 450 pakatengwa chishandiso chitsva cheIOS. Rangarira, aya maratidziro anogona kuchinja pamberi peiyo 2020 iPhone mauniti asati atengeswa.
ipad mhepo vs ipad yechisere chizvarwa
samsung galaxy s7 kumucheto moto
Samsung Galaxy Note 8 vs Galaxy S8 + yekutanga kutarisa: hombe vs hombe
Google inounza zvidhori zveSelfie paGboard - shandura kumeso kwako kuita emoji
Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: saizi kuenzanisa
Samsung inosarudza kugonesa FM Radio machipisi mune ayo mafoni anotengeswa muUS
Boost Mobile inotanga kutengesa ese mamodheru iPhone 11 svondo rino, heyi ese mitengo
Ungachinja sei kuzivisa kurira muFacebook Messenger, Hangouts, Viber, uye WhatsApp (Android dzidziso)